थाहा–९ मा माओवादीका बलामी वडा अध्यक्ष निर्वाचित, ३ सदस्य एमाले, १ सदस्य माओवादी (हेर्नुहोस् सबै उमेदवारको मत विवरण)
थाहा नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा जस्तो २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भएको थियो, यसपटक पनि झण्डै त्यही भएको छ । उक्त वडामा खसेका मतहरुको अन्तिम गणना गर्दा वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार बलामी निर्वाचित भएका छन् । यसपटक थाहा ९ मा माओवादीले वडा अध्यक्षसहित एक महिला सदस्य जितेको छ ।
वडा अध्यक्ष निर्वाचित बलामीले ७७८ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका रामकृष्ण बस्नेतले ६५६ मत प्राप्त गरे । थाहा–९ मा काँग्रेस तेस्रो भयो । प्राप्त विवरण अनुसार काँग्रेसका वडा अध्यक्ष उमेदवार देवकुमार श्रेष्ठले ४९४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
थाहा ९ मा वडा सदस्यहरुमा नेकपा एमालेका रमेश बलामी, रामकृष्ण कपाली र सानुमैया विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन् । बलामीले ७०६, कपालीले ६२७ र विश्वकर्माले ७१७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
माओवादीबाट महिला सदस्य पदमा अञ्जु श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छिन् । उनको मत ७३४ रहेको छ ।
हेर्नुहोस् थाहा ९ मा कसले कति मत पाए ?
राज कुमार बलामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) : ७७८ निर्वाचित
राम कृष्ण बस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) : ६५६
देब कुमार श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस : ४९४
पुण्य मान बलामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी : ४८
सरोज कुमार रेग्मी स्वतन्त्र : १६
रमेश बलामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ७०६ निर्वाचित
रामकृष्ण कपाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ६२७ निर्वाचित
श्याम कृण्ण बलामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५९९
निरन्जन घोले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५५४
सम्राट बलामी नेपाली काँग्रेस ४९२
रामकृष्ण लामिछाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ३५६
सानु बाबु लामा नेपाली काँग्रेस ३१०
पूर्ण सिं तामाङ्ग लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७३
अन्जु श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ७३४ निर्वाचित
राम माया लामा(छुमी) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ६८३
भावना गमाल नेपाली काँग्रेस ४६४
विनिता कपाली महिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५५
सानु मैया विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ७१७ निर्वाचित
विष्णु वि.क. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६८७
पर्मिला विश्वकर्मा नेपाली काँग्रेस ४३४
मिठु विश्वकर्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६७
बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्दै इन्द्र बानियाँ
थाहा नगरकार्यपालिका सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनका उमेदवारहरु निर्वाचित (मतसहित)
आज १० जेठमा थाहा नगरकार्यपालिकाको निर्वाचन हुँदै, मैदानमा माओवादी, एमाले र समाजवादीका उमेदवारहरु
यी हुन् थाहाका ६२ जननिर्वाचित प्रतिनिधि
सकियो थाहाको निर्वाचन, वडा अध्यक्षहरुको ‘रेस’ मा यस्तो रह्यो नतीजा
थाहा निर्वाचन : ११ मा माओवादी र १२ मा काँग्रेसको प्यानल नै(कसले कति पाए ?
थाहाकाे मेयरमा विष्ट र उपमेयरमा गाेपाली निर्वाचित (हर्नुहाेस् मत विवरण)
विष्णु विष्टलाई थाहानगर मेयरमा बधाइकाे ओइराे
थाहानगर प्रमुख विष्ट स्काउटबाट दिक्षित
बिइङ युथको उदाहरणीय काम : विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, विद्यालयलाई आगो नियन्त्रण यन्त्र
यस्तो छ : थाहानगरको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (पूर्ण पाठसहित)
हरेराम थापा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा छात्रवृत्ति वितरण
नेपाली सेनाले भन्यो : पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीले लेखेको पत्र आधिकारिक हो
मोबाईल एशोशियसन मकवानपुर उत्तरी क्षेत्रको अध्यक्षमा रायमाझी
जग्गा धिताे राखेर बैंकहरुले ऋण दिन छाडे, यस्ताे छ कारण